Filoha Obama, WTTC ary ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany: fanoherana lehibe ny fahitana an'i Afrika
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Filoha Obama, WTTC ary ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany: fanoherana lehibe ny fahitana an'i Afrika
Mafana ny fizahan-tany any Afrika ankehitriny. Raha tsy jerena intsony taloha, dia hita miharihary izao ny mety ho fizahantany amin'ny kaontinanta afrikanina.
Ny voalohany Birao fizahantany afrikanina (ATB) dia saika havoaka ao Cape Town mandritra ny ho avy World Travel Market Africa any Afrika Atsimo amin'ny 11 aprily miaraka amin'ny lisitr'ireo mpandahateny mahatalanjona, minisitra, mpitarika indostrialy tsy miankina, ary ireo mpiara-miombon'antoka nanatrika.
Herinandro alohan'ny Fandefasana ATB any Cape Town ny 11 aprily, ny World Travel and Tourism Council (WTTC) dia miomana amin'ny fihaonamben'izy ireo isan-taona any Seville, Espana. Miaraka amin'ny marika $ 4,000 ho an'ny solontena hanatrika ny fihaonambe, WTTC dia mikarakara ireo orinasa lehibe indrindra zato amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Mpandray fitenenana amin'ny tampon'isa dia tsy misy hafa fa ny teo aloha Ny filohan'i Etazonia Barack Obama Hizara ny heviny momba ny fizahan-tany amin'ny CEO WTTC Gloria Guevara izy.
Tamin'ny 2013 tao amin'ny Vovonana WTTC Filoha teo aloha Bill Clinton no mpitondra tenin-teny. Izy no nanararaotra ny filoham-pirenena maoderina indrindra tamin'ny sehatry ny fitenenana. Manome kabary am-polony isan-taona izy ary samy mitondra eo anelanelan'ny $ 250,000 ka hatramin'ny $ 500,000 isaky ny fandraisana andraikitra, araka ny tatitra navoaka. Nahazo $ 750,000 koa izy tamin'ny lahateny tokana tany Hong Kong tamin'ny 2011.
Ny WTTC dia tsy te-hanome hevitra momba ny sarany aloa, raha misy ny filoha Obama, fa any Cape Town tamin'ny fanombohan'ny Birao Fizahan-tany any Afrika, ny sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha Dr. Taleb Rifai dia nandoa ny fombany ary toy izany koa ireo olo-malaza fizahantany. ary ireo mpandray anjara avy amin'ny orinasa lehibe sy lehibe.
Manantena ny ATB fa ho marobe ireo minisitry ny fizahantany afrikanina, lehiben'ny birao fizahan-tany, mpandray anjara amin'ny orinasa lehibe tsy dia lehibe loatra hanatrika izany.
Ireo mpandahateny dia ahitana an'i Dr. Taleb Rifai, sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha, Geoffrey Lipman, filohan'ny ICTP sy SunX, Dr. Peter Tarlow, manam-pahaizana momba ny fiarovana sy ny fiarovana ny dia miaraka amin'ny serasera voarindra. Ny mpampiantrano Carol Weaving, talen'ny Reed Exhibition ary ny World Travel Market dia handray ny vahiny rehetra.
Anisan'ireo mpandahateny ihany koa i Alain St. Ange, minisitry ny fizahan-tany taloha ho an'i Seychelles, sy ireo manam-pahaizana momba ny varotra avy any Etazonia, India, Israel ary Alemana.
Ny filohan'ny tetezamita Juergen Steinmetz dia hanambara filoha vaovao.
Vahiny marobe gaga, ao anatin'izany ny minisitry ny fizahan-tany sy ny mpitondra fanta-daza amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany dia antenaina hanome ny fomba fijeriny sy ny hevitr'izy ireo momba ny fizahantany afrikanina.
Izay rehetra manatrika dia te-hampiseho ny fientanam-pony sy ny fanohanany ny Birao Afrikana fizahan-tany vaovao sy ny mety ho an'i Afrika amin'ny fivoaran'ny fizahan-tany vaovao. Maimaimpoana ny fanatrehana ny hetsika fanokafana ny Birao Afrikana.
Tao anatin'ny 7 andro lasa, ny vaovao momba ny fitomboan'ny fizahan-tany ho an'ny toerana afrikanina dia tsy tokony ho tsara kokoa ary tsy maintsy ho nahagaga ny maro.
Ny WTTC dia namoaka fanambarana an-gazety taorian'ny tatitra fikarohana momba an'i Afrika. Ny eTN dia nahazo famoahana toy izany tsy avy amin'ny WTTC ihany fa avy amin'ny minisitra, masoivoho ary birao fizahan-tany mampiseho ny avonavony ary angamba ny fahagagany sy ny famporisihan'izy ireo.
Ny filohan'ny birao misahana ny fizahan-tany afrikanina Juergen Steinmetz, izay CEO amin'ny eTN Corporation, tompon'ny eTurboNews, izay mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery WTTC, dia nitehaka i Gloria Guevara, CEO an'ny WTTC, noho izy nametraka an'i Afrika ho lohalaharana amin'ireo orinasam-pitetezana sy fizahan-tany lehibe indrindra.
WTTC: ny fitsangatsanganana sy ny fizahan-tany dia sehatry ny toekarena nasionaly haingana indrindra ao Zambia amin'ny taona 2018
Ny fizahan-tany Botswana izao dia mitentina iray amin'ny fito dolara ao amin'ny…
Etiopia dia mirakitra fitomboana lehibe indrindra amin'ny Travel & fizahan-tany eto amin'izao tontolo izao
Kenya Travel & fizahan-tany mihoatra ny sehatra manerantany sy isam-paritra amin'ny 2018
To manatrika ny fihaonana an-tampon'ny WTTC CLICK ETO hanatrika ny Fandefasana CLICK ETO ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany (ATB).Ny olona manatrika ireo hetsika roa ireo dia tokony hanondro izany amin'ny fisoratana anarana ao amin'ny Biraon'ny fizahantany afrikanina mba hahazoana fahitana misimisy kokoa.